Create footer of Myanmar Web Designer
ဒီတစ်ပတ်တော့ အားလပ်ရက် ပိုရလို့ ကျွန်တော် footer အတွက်ပါ video record လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာက website တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်းရဲ့ အပိုင်း (၄) လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျန်အပိုင်းများကို မဖတ်ဖူးသေးရင် ဒီသင်ခန်းစာကို မလေ့လာခင် ကျန်အပိုင်း သုံးပိုင်းကို အရင်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း (၁) --- Analyzingawebsite (ဝဘ်ဆိုက် တစ်ခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
အပိုင်း (၂) --- Coding header of Myanmar Web Designer
အပိုင်း (၃) --- Coding main menu of Myanmar Web Designer
အပိုင်း (၁)၊ (၂)၊ (၃) ကို ဖတ်ပြီးသားလူတွေကတော့ အခုသင်ခန်းစာအတွက် အောက်က video ကို ကြည့်ပါ။
အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ "Coding header of Myanmar Web Designer"
ကို ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီတစ်ခေါက် post မှာတော့ mainmenu အပိုင်းကို ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ “firebug” addon ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး အသုံးပြုပုံကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီတစ်ခါ firefox addon နောက်တစ်ခုကို ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၊ firefox addon ဖြစ်တဲ့အတွက် firefox မှာပဲ အလုပ်လုပ်မှာပါ၊ တစ်ခြား browser တွေအတွက်လည်း ရှာရင်တော့ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီ addon ကတော့ ...
ဒီတစ်ပါတ်တော့ ကျွန်တော်တို့ html နဲ့ css code တွေကို စရေးရပါတော့မယ်။ မရေးခင် ဘယ် language က ဘာအတွက် သုံးတယ်ဆိုတာလေး ပြောချင်ပါတယ်။ html ဆိုတာကတော့ “Hyper Text Markup Language” ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးတော့ website မှာ content (စာ, ဓာတ်ပုံ, ..) တွေထည့်ဖို့ သုံးရတဲ့ language ဖြစ်ပြီးတော့၊ css (Cascading Style Sheet) ကတော့ style sheet ဆိုတဲ့အတိုင်း html က ထည့်ထားတဲ့ content တွေကို ပုံစံပြောင်းခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်း အစရှိတာတွေကို လုပ်နိုင်တဲ့ language ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာကို ဘယ်လိုလူတွေ လိုက်နိုင်မလဲ?
ဒီသင်ခန်းစာကို “Analyzingawebsite” ကို ဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေ လိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ post ဟာ website ရေးခြင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတွေအတွက် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အခု သင်ခန်းစာမှာ website တစ်ခုရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေက ဒီသင်ခန်းစာကို လိုက်နိုင်မလဲ?
အခု သင်ခန်းစာကို website တစ်ခုကို မြင်ဖူးတဲ့လူတိုင်း လိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
how to subscribe post fromablog
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ဆိုရင် ဒီ blog မှာ tutorial တွေ တင်ပါတော့မယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အားသလောက် တင်မှာမို့လို့ ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ နေ့တိုင်း အသစ်တင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီတော့ အသစ်တင်ရင် လွတ်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် ဒီဘလော့က post တွေကို email နဲ့ subscribe လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်၊ အဲဒီလို လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘလော့ကို ဝင်မကြည့်လဲ ကျွန်တော် ပို့စ် အသစ်တင်လိုက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ email ထဲကို ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို subscribe လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘလော့ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာ "အသစ်တင်တိုင်း mail ပို့ပါမည်။" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အောက်ပါ ပုံထဲမှာ လမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးပါ။
Website တစ်ခု၏ အမြန်နှုန်း အရေးပါပုံ
website တစ်ခုရဲ့ အမြန်နှုန်းဟာ အရေးကြီးပါတယ်၊ တိုင်းတာချက်များအရ ကိုယ့်ရဲ့ website ကို လာကြည့်တဲ့သူတွေဟာ ၄ စက္ကန့်အတွင်းမှ မပေါ်လာရင် အဲဒီ site ကို မကြည့်တော့ပဲ ပိတ်လိုက်ကြပါတယ်တဲ့၊ အဲဒါအပြင် အရေးကြီးတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Google ပါပဲ Google က မြန်တဲ့ site တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်၊ key word ချင်းတူရင်တောင် အမြန်နှုန်းပိုမြင့်တဲ့ site ကို search result မှာ အပေါ်ဖက်ကိုကျတဲ့ နေရာမှာ ဖော်ပြပေးပါတယ်။
Website ၏ ကောင်းကျိုးများ
website တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာကောင်းကျိုးတွေ ရနိုင်လဲဆိုတာ သိထားဖို့ လိုပါတယ်၊ အဲဒီကောင်းကျိုးတွေကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်ဘာသာဖြင့် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သွားရောက် ဖတ်ရှုချင်ရင်တော့ website knowledge မှာ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။